Markay tahay safarka tareenka iyo baska. Raaxada waa boqorka. Marka aad go'aan ka dhexeeya Tareen oo ay kasoo horjeeddo Bus in Europe, Tareenadu ku guuleysto ma aha oo kaliya en wadada laakiin in-u dhexeeya, sidoo kale! At saldhigyada tareenka, aad awoodid sug aad tareenka ee raaxada iyo ammaanka, badan ee meelaha fadhiistaan, ee cun oo cab ama ay iibsadaan waxyaabaha safarka ha u.
Dabacsanaanta Tareenka iyo Baska
On in Tareenku, waxaad leedahay dabacsanaan guud; kaliya kor u soo noqdaan oo ay ku boodaan on hadba tababar, si loo waafajiyo qorshaha aad.
Tag on, ballansan safar tareen aad la Save A tareenka. Meel fara badan oo tareenka saaran, waxaad yeelan doontaa qolka in ay dib u fadhiisan, nasato oo wuxuu ku raaxaysan muuqaal ah halka aad u qorshaysanayso dhaqaaqo soo socda.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog on your site, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-versus-bus%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#hawraar Bus europetravel longtrainjourneys TrainStation talooyin tareenka tareen safarka TrainVSBus traveltips